Olona An-tapitrisany Maro No Milalao Amin’ny Findainy Ny Adin’i Duterte Filohan’i Filipina Manohitra ny Zava-mahadomelina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2016 2:38 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Español, Ελληνικά, English
Satria manamarika ny telo volana voalohany naha-teo amin'ny toerany ny Filohan'ny Filipiana Rodrigo Roa Duterte, nahatratra maherin'ny fandikana 2 tapitrisa ao amin'ny Google Play Store sy ny Apple App Store ny fitrohana ilay fampiasa amin'ny finday iray, mifototra amin'ny ‘adiny amin'ny asan-jiolahy’ mahabe adihevitra sy malaza be.
Na dia eo aza ny olana fanararaotana zon'olombelona sy ny tranganà famonoana tsy manara-dalàna mifandraika amin'ny adiny amin'ny asan-jiolahy dia manome pi-maso amin'ny fankasitrahana hazonin'ireo Filipiana maro ho an'ny Filohany vaovao ny lazan'ilay lalao Ady amin'ny Asan-jiolahy. Nanomboka tamin'ny nandraisan'i Duterte ny biraony tamin'ny faran'ny volana Jona, mihoatra ny 3.500 ny olona efa maty tamin'ny sehatry ny adiny amin'ny mpivarotra sy ny mpampiasa zava-mahadomelina. Miteny ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa maro tamin'izy ireo no nahiahiana ho mpivarotra zava-mahadomelina.
Voalohany natao ho an'ny olon-tsotra ny Ady amin'ny Asan-jiolahy nandritra ny faratampony tamin'ny fampielezan-kevitry ny filoha tamin'ny volana Aprily lasa teo, ary tsy ela akory izay dia namoaka ny dika faharoa izy, izay afaka alaina amin'ny smartphone, takelaka, sy iPads.
Ao amin'ilay lalao novokarin'i Anjo Pascual ary nohaingoan'i Donat Pascual avy ao amin'ny Tatay Games, afaka mibaiko ilay mpisehatra Rody (solonanaran'i Duterte) ireo mpilalao raha mitifitra jiolahy izy, mpanjakan'ny zavamahadomelina, ary mpandray anjara hafa, miaraka aminà basy isan-karazany araka ny hita eo amin'ny efijery.
Mbola mihazakazaka manerana ny efijery foana i Rody mba hanangonana karatra sy fitaovam-piadiana sady mitifitra ireo mpanao ratsy ihany. Mifarana ny lalao raha toa ka ny olon-dratsy no mahasambotra an'i Rody mialohan'ny ahafahany mamono azy ireo. Dionisia Pacquiao, renin'ilay mpanao ady totohondry sy Senatera Manny Pacquiao, avy eo no hita eo amin'ny efijery mitaingina bolabola fandrodànana.
Ny dika faharoa amin'ny Ady amin'ny Asan-jiolahy dia manasongadina ihany koa ireo namana mpandray anjara manampy toa an'i “Bato” Ronald Dela Rosa, Lehiben'ny Polisin'i Duterte, mitondra basy marovava ary ilay Senatera nodimandry Miriam Defensor-Santiago, izay hitsoaka vaingan'afo goavana mamely ireo mpanao heloka rehefa kitihan”ny mpilalao mba hanampy azy.
Tonga miaraka amina feo hentitry ny filoha toy ny hoe ”Andriamanitro oh, halako ny zava-mahadomelina”, ”Galit ako sa droga” (tezitra amin'ny zava-mahadomelina aho), ary ”Heto na ang huli niyong Merry Christmas” (Ity no Krismasy Sambatra farany ho anareo) manondro ny hafatra Krismasy nalefany ho an'ireo olon-dratsy tamin'ny Desambra 2015 lasa teo.
Ny ankabetsahan'ireo fanehoankevitra mikasika ny lalao dia tonga tamin'ny endrika hevitra:
Tokony mba misy akanjo fiarovana mba hialàna amin'ny kapa antsy, kapoka, sy biriky fanakànana hahaha asa mahafinaritra
Mahafinaritra ilay asa ry mpiaray tanindrazana, tsara ny fanavaozana ny lalao. Raha manana fanavaozana hafa ianareo afaka manao ny [Senatera Antonio] Trillanes sy [Leila] De Lima ho toy ny deba ve. Hahahaha
Starlight – 22 May 2016
Sary mahafinaritra, feo mampihomehy. Tsara koa raha misy fiovan'ny toerana isaky ny ambaratonga. Manantena aho fa misy bala mahomby kokoa ho an'ny karazana olon-dratsy satria milona be ny famonoana sady tsy misy bokotra fiatoana. Miandrandra fatratra ny fanavaozana ny bikan'ny lalao sy ny fahafahana milalao azy aho. Fiarahabana ireo mpamorona.
Ahm maty i miriam defensor santiago ilay senatera fahiny Afaka mandefa fanavaozana ve ianareo hanoloana azy fa manelingelina ahy ny milalao mpisehatra efa maty
Alice Liddel – 20 May 2016
Lalao tsara.. manomboka mankaleo rehefa eny an-dalàna.. be fahavalo miverimberina loatra.. ary mila fanavaozana ny safidy vitsivitsy na mividy fitaovam-piadiana.. lalao tsara izay mila safidy maro kokoa na fahavalo bebe kokoa..
Navoaka tamin'ny taona lasa ihany koa ny fampiasa iray hafa ho an'ny finday, misy lalao mandrava ny heloka bevava, Go Duterte. Lalao amin'ny findray hafa ihany koa, aingam-panahy nalaina tamin'ny Duterte Manao Ady Totohondry sy ny Duterte Tirador (antsamotady) lalao izay iadiany amin'ireo kandida ho Filoham-pirenena nandritra ny fifidianana 2016.